तपाईंले कहिल्यै कसैको गाली खानुभएको छ? - केवल एक प्रश्न - प्रकाशितः पुस १९, २०७० - साप्ताहिक
तपाईंले कहिल्यै कसैको गाली खानुभएको छ?
पुस १९, २०७०
धेरै खाएको छु, एउटा रमाइलो घटना, मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको एक मान्छेले बानेश्वरमा कलेजबाट र्फकने क्रममा एकदमै नराम्रोसँग गाली गरेको थियो, त्यो पनि बिना कारण।
- केकी अधिकारी, नायिका
सानोमा पैसा हुँदैनथ्यो तर त्यही उमेरमा फिल्म हेर्न जानुपर्ने, मिठो-मिठो कुरा खानुपर्ने, त्यही क्रममा एकदिन ममीको ब्यागबाट २० रुपैयाँको नोट चोरेको थिए, चलचित्र हेर्न अनि चटपटे खान। ममिले थाहा पाउनुभएछ, चलचित्र हेरेर फर्किएपछि यति नराम्रोसँग रामधुलाई र गाली खाको छु नि!
- बादल प्रसाईं, गायक
सानोमा बाबा-ममिको गाली खुबै खाइयो, घरमा भाइबहिनीसँग चल्नुपर्ने, केही कुरा नै नहुँदा पनि हास्नुपर्ने, डुल्नुपर्ने त्यसैले मज्जाले गाली खाएको छु। कहिलेकाहीँ बिनाकारण शिक्षक-शिक्षिकाको गाली खाइएको छ।
- राजबल्लभ कोइराला, नायक
गाली खाएरै ठूलो भइयो, सानोमा ममि-बुबाको त्यसपछि स्कुलमा शिक्षकको अहिले जागिरमा कहिलेकाहीँ हाकिमको खप्की खानु परिरहेको छ। अब त अत्ति नै भैसक्यो, केही न केही गर्नुपर्ला जस्तो छ।
- विवेक खतिवडा, भिजे/निर्देशक
ममि-ड्याडिको इच्छा बिजनेस गरोस भन्ने थियो मैले हिरो हुन्छु भने, त्यो दिन नराम्रैसँग गाली खाए। दुवैजना मिलेर दह्रो गाली गर्नुभयो-'बन्छस् हिरो, न अनुहार छ, न जिउडाल नै छ, न पैसा छ, त्यतिकै बन्छस् हिरो?'
- गजित बिष्ट, नायक
प्रकाशित :पुस १९, २०७०
कसैको भित्री पहिरन देख्नेबित्तिकै यौन उत्तेजना बढ्छ
घुमेर कहिल्यै नसकिने हाम्रो देश
तपाईंले समाजप्रति कत्तिको उत्तरदायी हुनुहुन्छ?
अनलिमिटेड गिफ्ट भौचर पाउनुभयो भने तपाईंले किन्ने पहिलो प्राथमिकताका तीन चीज के-के हुन सक्छन् ?
तपाईंलाई घत परेर हाँसेको क्षण कुन हो ? वैशाख २४, २०७६
आमा वाणी वैशाख २१, २०७६
तपाईंको बौद्धिक सम्पत्ति कत्तिको सुरक्षित छ ? वैशाख १५, २०७६
२०७६ का लागि तपाईंको ठोस योजना के छ ? वैशाख ७, २०७६